Waa maxay ifafaalaha El Niño | Saadaasha Shabakadda
Meeraha ay 75% dushiisa biyuhu daboolaan, badaha ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara jaangooynta cimilada adduunka oo dhan, laga soo bilaabo tiirarka illaa kuleylaha. Oo halkaasay ku taal, biyaha kulaylaha ee bariga Baasifigga, halkaas oo ay ku dhacdo ifafaale cimilo ah oo ka bilaabma iyada oo la soo koobay, laakiin ku dambaynaysa cawaaqib xumo ka jirta Dunida oo dhan: El Niño.
Qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa waxa uu yahay iyo sida uu u saameeyo cimilada adduunka sidaa darteed wax badan ayaad ka baran kartaa badaha iyo saamaynta ay ku leeyihiin dhammaan qaybaha dhulkeenna.
1 Waa maxay ifafaalaha El Niño?
2 Sidee ayaa lagu ogaadaa?
3 Saamayn intee le’eg ayey ku leedahay cimilada?
4 Xiriirka El Niño iyo isbedelka cimilada
El Niño Waa dhacdo la xiriirta diirimaadka biyaha bariga Baasifigga Baasifigga, meertada ah, oo dhacda saddexdii ama sideedii sano oo kasta oo soconaya illaa 8-10 bilood. Waa wajiga diiran ee qaabka cimilada dhulbaraha ee loo yaqaan 'El Niño-Southern Oscillation', ENSO oo loo soo gaabiyay Ingiriis. Waa dhacdo sababa waxyeello aan la soo koobi karin oo culus oo ka dhacda aagagga ku-meel-gaarka ah iyo bartamaha, inta badan roobabka culus ee da'aya awgood.
Kalluumeysatada reer Peru waxay u bixiyeen magacaas iyagoo ula jeeda ilmaha yar ee Ciise, sannad walbana diirimaad diirran ayaa u muuqda Kirismaska. Ma ahayn illaa 1960 in la ogaaday in aysan ahayn dhacdo maxalli ah oo reer Peru ah, laakiin ay dhab ahaantii tahay wuxuu cawaaqib ku leeyahay dhammaan kulaylaha Baasifigga iyo xitaa ka sii fog.
Weli ma cadda sida ay ifafaalahan u soo ifbaxayaan, laakiin khabiirka saadaasha hawada Jacob Bjerknes (1897-1975) wuxuu isku xiray heerkulka sare ee dusha sare ee badda iyo dabeylo daciif ah oo ka imanaya bariga iyo roobab xoog leh oo la socday.
Markii dambe, khabiir kale oo saadaasha hawada oo la yiraahdo Abraham Levy ayaa xusay taas biyaha badda, oo qabow xilliga dayrta iyo jiilaalka, way kululaadaan sidaas darteedna, heerkulka hawadu wuu kordhaa. Hirar biyo kulul ayaa u socdaala badda hoosteeda, laga bilaabo Australia ilaa Peru.
Sidee ayaa lagu ogaadaa?
Maaddaama ay leedahay cawaaqibyo waxyeello u geysan kara, aad ayey muhiim u tahay in la helo nidaamyo lagu ogaan karo waqtiga. Sidaa darteed, tallaabooyin ku habboon ayaa la qaadi karaa si looga fogaado tirada ugu badan ee suurtogalka ah ee dhimashada. Waayo, dayax gacmeedyada, buul biyoodka sabeynaya ayaa la adeegsadaa oo badda ayaa lagu lafa guraa si loo ogaado waxa xaaladaha dusha sare ee badaha aagga dhul-baraha ay soo bandhigaan. Intaas waxaa sii dheer, dabaysha ayaa la baaraa maxaa yeelay, sidaan horay u soo sheegnay, isbeddelka dabayshu wuxuu noqon karaa tilmaan in dhacdada El Niño ay dhici doonto.
Saamayn intee le’eg ayey ku leedahay cimilada?
El Niño, waa dhacdo soo jirtay sannado badan, waxay saameyn weyn ku leedahay cimilada adduunka. Xaqiiqdii, maanta waxay wax ka beddeli kartaa xaaladaha cimilada ee aag aad u badan, koritaanka dadka darteed, waxay noqoneysaa mid deg deg ah in dalalka ay dhibaatadu saameysey ay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo dhab ah si ay ula tacaalaan saameyntooda. Waana taas, ka dib horumarinteeda, isbeddelada waxay ku dhacaan heerkulka iyo qaababka roobka iyo dabeylaha meeraha.
Aynu ogaanno saameynteeda:
Caalamka: diiwaanka heerkulka, isbeddelada wareegga hawada, muuqaalka cudurada ay adag tahay in la tirtiro (sida daacuunka), luminta dhirta iyo xayawaanka.
Koonfurta Ameerika: hoos u dhaca cadaadiska cimilada, kululaynta Humboldt-ka Hadda iyo xilliyada oo aad u qoyan inta lagu jiro xilliga roobku da'o.
Koonfur Bari Aasiya: samayska daruuraha oo hooseeya, abaaro la taaban karo iyo hoos u dhaca heerkulka badda.
Weli, waxaa muhiim ah in la ogaado taas ma jiraan laba El Nino isku mid ah. Tan macnaheedu waxaa weeye in aagaggii ay saameeyeen markii ugu dambeysay aysan markale saameyn doonin. Waxay yeelan doonaan ixtimaal sare, haa, laakiin ma ogaan kartid hubaal.
Xiriirka El Niño iyo isbedelka cimilada
In kasta oo aan weli si dhab ah loo ogeyn saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay ifafaalaha El Niño, haddana saynisyahanno dhowr ah ayaa ku tilmaamay a waxbarashada oo lagu daabacay joornaalka 'Nature' sanadkii 2014 in inta jeer ee ifafaalaha, iyo sidoo kale xooggiisa, ay u badan tahay inuu kordho maaddaama celceliska heerkulka adduunka ee meerahu kor u kacayo. Si kastaba ha noqotee, Gudiga Dowladaha Isbedelka Cimilada (IPCC) uma arko xiriirkan inuu yahay mid la xaqiijiyay, waayo?
Hagaag jawaabtu waa taas Markii aan ka hadlayno isbeddelka cimilada waxaan ka hadlaynaa isbeddellada cimilada, halka dhacdada El Niño ay tahay kala duwanaansho dabiici ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira khabiiro kale oo saadaasha hawada ah, sida Jorge Carrasco, oo ku raacsan daraasadda in adduun diiran, xoojinta iyo soo noqnoqodka El Niño ay kororto.
Sidaan soo aragnay, El Niño waa ifafaale saameyn badan oo muhiim ah ku yeelan kara qeybaha kala duwan ee adduunka. Amnigeenna, waxaa muhiim ah in la yareeyo qiiqa gaaska lagu sii daayo si looga hortago heerkulka inuu sii socdo, tan iyo haddaannaan yeelin, marka lagu daro saamaynta isbeddelka cimilada, waa inaan iska ilaalinnaa dhacdada El Niño ee aadka u daran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay ifafaalaha El Niño?
Mawjadaha Kelvin waxay dardar gelinayaan dhalaalida Antarctica
Donald Trump wuu beddeli karaa siyaasadiisa cimilada!